Wiil uu dhalay guddoomiyihii hore ee degmada Afgooye oo xalay laga afduubtay gurigiisa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wiil uu dhalay guddoomiyihii hore ee degmada Afgooye oo xalay laga afduubtay gurigiisa
Wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in habeenkii xalay halkaasi lagu afduubtay wiil uu dhalay guddoomiyihii hore ee degmadaasi C/laahi Cabdi Axmed Iideey.
Kooxo hubeysan oo aan heybtooda la aqoon islamarkaana wejiyadda soo xirtay ayaa la sheegayaa inay xalay weerar ku qaadeen guriga uu degan yahay wiilka guddoomiyihii hore ee degmada Afgooye, iyagoona kadib halkaasi ka afduubtay.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u xaqiijiyay in afduubka uu jiro, iyagoona afduubkaasi ku tilmaamay inuu ahaa mid aan hore loo arag islamarkaana ku cusub degmada Afgooye.
Illaa iyo haatan lama oga halka ay kooxahaasi hubeysan la aadeen wiilka uu dhalay guddoomiyihii hore ee degmada Afgooye C/laahi Cabdi Axmed Iideey.
Dhinaca kale, ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka degmada Afgooye iyo kan gobolka Sh/hoose, kaas oo ay kaga hadlayaan afduubkan lasoo sheegayo in xalay loo geeystay wiil uu dhalay gudoomiyihii hore ee degmada Afgooye.
Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii ugu dambeysay waxaa degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose kusoo batay falalka amni darro, waxaana degmadaasi dhowr jeer hore degmadaasi ka dhacay weeraro ay Al-shabaab kusoo qaadeen, inkastoo aan la ogeyn kooxahaasi afduubtay wiilkaasi inay ka tirsan yihiin Al-shabaab iyo inkale.